South Africa tour of Zimbabwe 2014 - Live Scores, News, Video & Radio
Match reports, latest news and live cricket scores from South Africa's tour of Zimbabwe to play one Test and three One-Day Internationals.
Zimbabwean all-rounder Prosper Utseya has had his bowling action reported following the recent One-Day International series against South Africa with his arm ball and quicker ball set for further scrutiny.
South Africa Give Amla A Rest
With the series already in the bag, South Africa will rest Hashim Amla from the third One-Day International against Zimbabwe in Bulawayo.
All-Round Proteas Please De Villiers
AB de Villiers declared himself pleased with the efforts of both his batsmen, bowlers and fielders during their 95-run win over Zimbabwe in the first One-Day International in Bulawayo.
Amla Sets Up Crushing Win
Hashim Amla scored an unbeaten 122 as South Africa scored a comprehensive 93-run win over Zimbabwe in the first One-Day International in Bulawayo.
Domingo Happy With SA Progress
South Africa head coach Russell Domingo has given his Test team a positive half-term assessment following series wins in Sri Lanka and Zimbabwe.
Elgar Handed Reprimand
Hendricks Out Of Zimbabwe ODIs
South African fast bowler Beuran Hendricks has suffered a back injury and has been ruled out of the upcoming One-Day Internationals in Zimbabwe.
South Africa Wrap Up Victory
South Africa closed day three of the one-off Test against Zimbabwe 113 runs ahead after being bowled out for 397 as John Nyumbu picked up a five-wicket haul on debut for the home side.
After being named in a 25-man training squad earlier in the week, Mark Vermeulen has been included in Zimbabwe's 15-man squad to play South Africa in a single Test beginning tomorrow (9th August).
We Respect Zimbabwe - JP Duminy
South African batsman JP Duminy has reinforced the comments of his captain Hashim Amla in saying that the Proteas will be affording Zimbabwe complete respect as they prepare for their Test match in Harare.
Not Taking Zimbabwe Lightly - Amla
South Africa may be the side at the top of the Test rankings and one that has never lost a Test to Zimbabwe, but that isn't stopping Hashim Amla from sounding a note of caution ahead of their one-off Test in Harare.
South Africa Call Up Rossouw, Shezi
South Africa have named uncapped batsman Rilee Rossouw and fast bowler Mthokozisi Shezi in their One-Day International squad to take on Australia and Zimbabwe from later this month.
Vermeulen In Zimbabwe Squad
Zimbabwe have named a 25-man training squad ahead of series against South Africa and Australia, with a place in it for Mark Vermeulen, who has not played international cricket since 2009.
Proteas Unchanged For One-Off Test
Fresh from a historic 1-0 series win in Sri Lanka, South Africa have named an unchanged 15-man squad for the one-off Test against Zimbabwe next month.
Zimbabwe Make Major Changes
Zimbabwe Name Aus, SA Series Dates
Zimbabwe Cricket (ZC) has confirmed the dates for series in August and September against South Africa and a One-Day International tri-series with both Australia and South Africa.